WWE's Southpaw Regional Wrestling show kukanda uye kuongorora - Wwe
WWE's Southpaw Regional Wrestling show kukanda uye kuongorora
Iko kune nyowani nyowani pane yeWWE.com YouTube chiteshi chakatora iyo nyika yekurwa nedutu.
Iwo akateedzana anoratidza yekunyepedzera kupandukira mutsimba kukwikwidza kunodaidzwa kunzi Southpaw Regional Wrestling. Iyo nyaya yenyaya inoenda zvekuti WWE yakawana mavhidhiyo ekusimudzirwa pavanenge vachitsvaga kuburikidza nezvakachengetedzwa kuti vawedzere zvirimo paWWE Network.
WWE yakawedzera backstory kune kukwidziridzwa kubva kunaKayfabe maonero, vachichiidza seimwe yenzvimbo dzakakurumbira muUnited States. Kukwidziridzwa kwacho kwainzi kuve pazhenith yayo kumashure mu1987 ichikwikwidzana neiyo yaimbove WWF iyo yaitungamirwa nevakada Hulk Hogan naRandy 'Macho Man' Savage.
Iyo mini-nhepfenyuro inoratidzira matarenda eSuperstars mazhinji kubva kuazvino WWE roster.
- Tex Ferguson - Luke Gallows
- Chad 2 Badd - Karl Anderson
- Chett Chetterfield - Fandango
- Lance Catamaran - John Cena
- John Johnson - TJ Perkins
- Clint Bobski - Chris Jericho
- Chip Henderson - John Cone
- Ric Flair Anobhadharwa Anoteedzera - Ric Flair
- Anonakidza Pelvis Wesley - Heath Slater
- Big Bartholomew - Rusev
- Surf Dudes Nemafungiro - Kukwidzwa
- VaMackelroy - Tyler Breeze
- Ndebvu Huru - Luke Harper
- Spanish Voiceover Guy - Carlos Cabrera
- Rufaro rwechiKristu - Lana
Iye murume kuseri kweGungwa Chisikwa hunhu haasati azivikanwa. Mazita aSheamus, Cesaro, Baron Corbin, naJack Swagger ari kukandwa mudenga.
Iyo webhu nhepfenyuro ndeye satirical inotorwa neWWE pane iyo tsika tsika inowanikwa mukurwa mukati memakore makumi masere. Zvikamu zvina zvakasanganiswa zvine pamusoro peanopfuura miriyoni maonero paWWE yepamutemo YouTube chiteshi kusvika zvino.
zvekuita kana wako akashata
Zvisinei, chikamu chinosuruvarisa pamusoro pechiratidziro ndechekuti hachina kuverengerwa paWWE Network. Asi, zvikamu zvakasimudzirwa paWWE.com. John Cena, uyo anotamba Lance Catamaran, akatumira tweet kuti show inogona kuwana mukurumbira kana iyo WWE Universe yakada kudaro.
Kuyera kweIMDB kwechiratidziro kwabva padenga, kwakamira pane inonakidza 9.5 chiyero kuburikidza 65 wongororo.
Kunyange zvichiratidza senge Musasa WWE , Yakagadzirirwa uye Nguva Yenyaya paWWE Network havana kukwanisa kusvika kuzere kugona kwavo, Southpaw Regional Wrestling inogogodza bhora kunze kwepaki mune izvo. Iyo ingangove yechokwadi yeWWE chirongwa mune ichangopfuura ndangariro.
Hunhu hwemhando hunoshamisa, uye zvesimba zvevakanda vaisa show pane imwe nhanho inoshamisa.
Lance Catamaran (John Cena) naChett Chetterfield (Fandango) ndivo varatidziri vechiratidziro vane matambudziko avo.
Chetterfield inoratidzwa semunhu anonwa kliniki akashushikana anowanzo gara akadhakwa panguva yekutepfenyura. Iye murume akasurukirwa mune yepakati-pehupenyu dambudziko rakasiiwa nemukadzi wake anoita hupombwe, Susan.
John Cena saLance Catamaran paSouthpaw Yemunharaunda Wrestling
Catamaran, kune rimwe divi, inoita kunge ine zvinhu zviri kudzorwa uye iri mubishi kushanda basa rayo semupepeti, vachitengesa chiitiko chakazara kwazvo munhoroondo yehunyanzvi Wrestling, iyo Lethal Leap Year.
sei kusarudza pakati pevarume vaviri
Catamaran inotaridzika kuva yekudzosera kuzwi raMemphis Wrestling, Lance Russell. Sezvakaziviswa muzvikamu zvenguva yemberi, Catamaran ane mashoma tarenda semuzivisi uye anozivisa mukubwinya kwake kwekare kwevhiki nhanhatu semutauri weNhau muUtica, New York.
Catamaran inorwira kuchengetedza runyararo mukusimudzira kunoitiswa nenyonganiso uye entropy.
John Johnson (TJ Perkins) ane jasi rekuve Southpaw Regional Champion. Mubvunzurudzo naClint Bobski, hunhu hwakaunzwa kuhupenyu naiye anoshamisa ane tarenda Chris Jericho; Johnson anoratidzira 'hunyanzvi hwake hwekutsvaga.'
Johnson akapendwa mune akafanana generic 80s jobber ane mashoma mazwi uye mashoma kune asina charisma.
Chris Jericho naRusev saClint Bobski naBartholomew
Iyo showa ine mukana wekuve mumwe weakanyanya kutariswa akateedzana kana ikasimudzirwa nenzira kwayo. Iyi nhepfenyuro yakapa vateveri hwindo rekuona mamwe asinganyanyooneka eWWE Superstars senge Fandango uye Ascension.
Izvo zvakare zvinopa vateveri mukana wekutarisa yavo yavanofarira WWE Superstars mune imwe mwenje. TJ Perkins naRusev saJohn Johnson naBartholomew zvakateerana, mienzaniso inoshamisa yekugona kwevarume ava kana vakapihwa mahara.
Uyezve verenga: WWE Nhau: Matt Hardy anopindura tweet yaJohn Cena nezve Southpaw Regional Wrestling
Iko kukanganisa kwechiratidziro kwaigona kuonekwa ipapo apo Fandango akaonekwa mumutambo wega wega naJohn Cena paSmackDown LIVE.
Kutaura kubva kubhizimusi rekutarisa, iyo show yatove nekukwanisa kuisa KFC kushambadza vachishandisa matauriro ezwi raRic Flair. Iko kune zvakare kurira kwemutsva wekutengesa mutsara unobva pane mavara uye logo yeSouthpaw Regional Wrestling iyo inoshumirira kusiyanisa vanamati vewrestling vevahedheni kubva kune vasina kujaira vaoni.
Muchidiki kwazvo, WWE yakarova pamombe yemari muSouthpaw Regional Wrestling. Ichi chiratidzo chemitambo ndizvo chaizvo zvinodiwa neWWE Network.
Pane runyerekupe rwekuti chirongwa ichi hachizodarika zvikamu zvina zviripo asi John Cena akauya kuvateveri kuti vataure zvavanofunga uye varatidze rutsigiro rwavo kana vachida kuona zvimwe zvikamu zvemutambo wekuseka.
Titumire isu matipi emashoko ku info@shoplunachics.com
kubatsira munhu sei nekurambana
3 nguva WWE superstars akaba imwe yekupedzesa yekumhanya
Chii chakaitika kumaneja weThe Undertaker Paul Bearer?
Heels Star inoratidza kana hunhu hwake hwakavakirwa paWWE Superstar Edge
2 WWE superstars vanoda rwiyo rutsva uye 2 WWE superstars vasingadaro
Alyssa Scott ndiani? Zvese nezve iyo modhi kubva kuna Nick Cannon's show ane nhumbu yakonzera runyerekupe
John Cena anogovera chinyorwa chakavanzika nezve CM Punk
Yakakomberedzwa Circle Reddit Nharaunda inotumira michero tswanda yeTatu H
Kukwezva Kwomuviri Kwakakosha Sei Muhukama? 7 Zvinhu Zvokufunga.
Chii chakakosha mambure aCarole Baskin? Tiger King nyeredzi inotengesa nemesis Joe Exotic chivakwa che $ 140k
Infographic: WWE Royal Rumble 2017 stats uye manhamba
WWE Nhau: Zack Ryder anoratidza izvo zvakamukurudzira kutanga podcast
Multiple zita shanduko rinotarisirwa kuitika paSummerSlam - Mishumo
zvinorevei kana munhu achivava
unofanira kuona mukomana wako kangani
zvinhu zviri nyore kuita kana iwe uchinetseka
maitiro ekuita nekunzwa kushata
inoratidza mukomana mutambi
sei ndiri kutonga kwazvo muhukama hwangu